यि हुन गोरखाबाट रसिया वल्र्डकप हेर्न जाने भाग्यमानी - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
यि हुन गोरखाबाट रसिया वल्र्डकप हेर्न जाने भाग्यमानी
Published On : २ बैशाख २०७५, आईतवार १६:५८
‘कोक खाम् रसिया जाम्’ अभियान अन्तर्गत तपाईको शहर गोर्खाबाट सन्तोष बिसुरालले जित्नु भयो रसियामा हुने विश्वकप प्रत्यक्ष हेर्न पाउने सुनौलो मौका
सन् १९७८ देखिनै कोका कोला फिफाको आधिकारिक प्रायोजक रहँदै आएको छ र त्यस पल देखिनै हरेक खेलमा कोका कोला संगै रहेको छ । यो चालीसाँै वर्षको आधिकारिक प्रायोजकमा, कोका कोलाले यस वर्ष नेपालमा सबै भन्दा ठुलो अभियान ल्याएको छ ‘कोक खाम् रसिया जाम्’ जहाँ ४० जना भाग्यसाली उपभोक्ताले फिफा प्रत्यक्ष हेर्न रसिया जान पाउने छन् । कोका कोला नेपालले आफ्ना उपभोक्तालाई निकै ठुलो र आश्चर्यजनक क्याम्पेन सार्वजनिक गरेको छ । ‘कोक खाम्, रसिया जाम्’ अफर अन्तर्गत कोकाकोलाका उपभोक्ताले जीवनमा एक पटक आउने मौका प्राप्त गर्ने छन् . यस योजना अन्तर्गत भाग्यशाली उपभोक्ताले सम्पुर्ण खर्चसहित रसियामा हुने विश्वकप २०१८ प्रत्यक्ष हेर्ने मौका पाउनेछन् । यस योजना अन्तर्गत ४० भाग्यशाली उपभोक्ताले रसिया पुगेर विश्वकपको प्रत्यक्ष अनुभब गर्नेछन् । यसका अलावा २०० उपभोक्ताले दैनिक आकर्षक उपहार जित्न सक्नेछन् । फिफा लोगो अंकित फिफा वल्र्डकप बिशेष उपहारहरु जस्तै स्पिकर, हेडफोन, पेन ड्राइभ जस्ता बस्तुहरु जित्न सक्ने छन् भने हरेक दिन २ जनाले २४ इन्चको टेलिभिजन जित्न सक्नेछन् । यसरी यो पुरै क्याम्पेनमा १२ हजार ६०० जनाले बिभिन्न प्रकारका उपहार जित्न सक्नेछन् ।
तपाईको शहर गोर्खाबाट सन्तोष बिसुरालले जित्नु भएको छ रसियामा हुने विश्वकप प्रत्यक्ष हेर्न जान पाउने सुनौलो मौका । तपाई पनि छिटो भाग लिनुहोस् ! रसियामा हुने विश्वकप २०१८ प्रत्यक्ष हेर्ने जानुका साथै तपाई बन्न सक्नु हुन्छ फिफा लोगो अंकित फिफा वल्र्डकप बिशेष उपहारका विजेता ।